जिब्रोले निधार छुने यज्ञबहादुरबारे बेलायती पत्रिकामा चर्चा, के भन्छन् उनी ? [भिडियोसहित] - Khabar Break | Khabar Break
जिब्रोले निधार छुने यज्ञबहादुरबारे बेलायती पत्रिकामा चर्चा, के भन्छन् उनी ? [भिडियोसहित]
मोरङ जिल्लास्थित उर्लाबारीको एक विद्यालयको बस चलाउने यज्ञबहादुर कटुवालको अनौठो प्रतिभा छ । आफूसँग संसारकै सबभन्दा लामो जिभ्रो भएको उनी दाबी गर्छन् । उनले तल्लो ओठले नाक छोप्न सक्छन् अनि जिभ्रोले आँखीभौं चाट्न सक्छन् ।
उनका एक साथीले सामाजिक सञ्जालमा उनको निधारमा जिभ्रोले चाटिरहेको भिडियो पोस्ट गरेपछि उनी स्थानीयहरूमाझ चर्चित भएका छन् । तर उनलाई गाडी चलाइरहेको बेलामा आफ्नो अनौठो प्रतिभा नदेखाउन चेतावनी दिइएको छ किनकि विद्यार्थीहरू डराउँछन् ।
‘बच्चाबच्ची मनजिक आउनै चाहँदैनन् । मलाई देखेर कसैकसैले त पाइन्टमै सूसू गरिदिन्छन्,’ उनले भने । ‘मैले हरर फिल्ममा खेल्ने मौका पाएँ भने मेकअप नलगाइकनै मान्छेलाई तर्साउन सक्छु ।’
केही मानिसले उनलाई नराम्रो भने पनि कटुवाललाई केही फरक पर्दैन । उनी भन्छन्, ‘म यस्तैमा गजब देखिन्छु ।’ अनि उनी फेरि ओठले नाक छोप्छन् । कटुवालले गिनिज बूक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाउने आशा गरेका छन् ।
कटुवालको भिडियो बनाएका पुष्कर नेपाल भन्छन्, ‘उनी शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त छन् । उनले सानै उमेरमा आफ्नो निधार चाट्न सक्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए । उनको जम्मा एउटा दाँत छ जसले गर्दा उनी यस्तो
अद्भुत काम गर्न सक्छन् । उनको क्षमता अनौठो छ र गजबको पनि लाग्छ ।